वैङ्कहरूको करोडाै लगानी डुब्दै | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति ७ श्रावण २०७६, मंगलवार १०:१४ लेखक nepali janta
पोखरामा निर्माणाधीन अन्नपूर्ण केवलकार प्रालिले मुआब्जा नै नदिई निजी जग्गा हडप्ने दाउ कसेपछि केवलकार चल्ने सपना चकनाचुर हुने संकेत देखिएको छ । केवलकार सञ्चालक कालु गुरूङले शक्त्ती र पैसाको भरमा जबरजस्ति केवलकार सञ्चालन गर्न खोजेपछि पिडित स्थानियहरू अान्दोलित बनेका छन् । केवलकारमा लगानि गर्ने राष्टिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क र सनराइज बैङ्कको करोडाै लगानी डुब्ने स्थितिमा पुगेको छ । विवाद बढ्दै गएपछि वैङ्कहरूलाइ समेत तनाव भएको छ । बैङ्क स्रोतका अनुसार यस विषयमा अान्तरिक स्रोतबाट बुझ्रने काम भइरहेको छ ।
राजनीतिक शक्ति र पैसाको आडमा स्थानियका जग्गा नै कब्जा गर्न खोज्ने केवलकार सञ्चालकहरुले मुआब्जा वापतको पैसा स्थानियलाई दिनु त परको कुरा उल्टै स्थानियलाई ठुलो आवाज नगर्न धम्की दिई रहेको छ । सञ्चालकले उचित मुआब्जा दिन्छु भनेर स्थानियलाई झुक्याई हालसम्मपनि कुनै मुआब्जा दिएका छैन । मुआब्जा माग्दा उल्टै चुपचाप बस नत्र राम्रो हुदैन भन्दै धम्काई रहेको पिडितहरू बताउछन् । पिडित स्थानियले आफ्नो सम्पतिको रक्षाकालागि सर्वोच्च अदालत समेत धाईसकेका छन् । प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र समशेरको एकल इजलासले जग्गा कब्जाको शैलीमा प्रस्तुत नहुन र कामलाई यथाअवस्थामा रोक्न केवलकार सञ्चालकलाई अन्तरिम आदेश समेत दिईसकेका छन् तर अन्नपूर्ण केवलकारका सञ्चालकहरु भने स्थानियलाई डराई धम्काई आउँदो दशैँमा उनिहरुको जग्गा माथि नै केवलकार कुदाउँने रणनीति बनाएका छन् ।
अन्नपूर्ण केवलकारको अहिले तयार पारिएको रुटबाट दर्जनाै जग्गाधनी मारमा परेका छन् । पिडित स्थानियको गुनासो छ “मुआब्जा दिन्छौँ भन्दै मिति सादै भोली, पर्सी, एक महिना पछि भनी सञ्चालकहरुले ढाट्दै आएको साढे एक वर्ष भैसक्यो । अहिले त केवलकार कुदाउने तयारी करिब अन्तिम चरणमा आईसक्दा पनि मुआब्जाको नाममा सुक्को छैन।”
सो केवलकारका मुख्य लगानीकर्ता व्यवसायी कालु गुरुङ हुन् ।
केबलकारमा कालु गुरुङ सहितका अन्य नेपाली व्यवशायीको ७५ प्रतिशत लगानी छ । यो केवलकार सञ्चालनकालागी २४ रोपनी सरकारी जग्गा परेको छ जसको ४० वर्षसम्म लिजमा उपभोगकालागी सरकारले स्विकृति दिईसकेको छ । यस वापत सरकारलाई राजश्व तिर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारलाई राजश्व तिर्न तयार भएका अन्तपूर्ण केवलकार प्रालिका अध्यक्ष कालु गुरुड. व्यक्तिका निजी जग्गा भने त्यसै हडप्ने दाउ कसेर बसेका छन् । डेढ वर्षदेखि निर्माणाधीन अन्नपूर्ण केवलकारको रुटले पोखराको सेदीदेखि सराङकोट जोड्ने छ । यसको जम्मा लम्बाई साढे २ किलोमिटर रहेको छ । गुरुङले EIA रिपोट समेत घुस खुवाएर पास गर्न लगाएको स्रोतले बताएको छ ।
सम्भोगका फाइदा यस्ता छन्
एजेन्सी । सम्भोगका विषयमा हरेक व्यक्तिको आवश्यकता फरक हुन्छ । कतिपल्ट सम्भोग गर्नु सही हो भन्ने वारेका कयौं अध्ययन…
बुटवल । कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका नेतामाथि गोली प्रहार भएको छ ।
समाजवादी पार्टीका शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष रामनयन…
आईजीपीका लागि को योग्य, को अयोग्य ? वरियताक्रममा एक नम्बरमा रहेका डीआईजी नै आईजीपी हुने प्रावधान !
काठमाडाैँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) प्रकाश अर्यालले आगामी चैत २९ गतेबाट अनिवार्य अवकास पाउने भएपछि नयाँ आइजीपीका लागि डिआइजीहरुबीच…
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र हिम्मतवालीका नायक सुदर्शन गौतम वर्षौंदेखि मानव तस्करीमा संलग्न रहेको खुलेको छ ।
अमेरिकी सामुद्रिक मार्ग पाभोमा…
काठमाडौं । चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले विवाहसम्बन्धमा गाँसिएका छन् । उनीहरूले सोमबार…
असिफा बानु बलात्कार-हत्या प्रकरण: च्यातिएको बैजनी घाँघर र रगतमा लत्तपतिएकी असिफा
कास्मिरको कठुवामा बालिका बलात्कारपछि हत्या भएको विषयको आगो अहिले भारतभरि नै…
साला फेसबुक !! 168 views
दम्पती त्रिशूलीमा हेलिनुको कारण मिटरब्याज 13 views
बच्चासहित दम्पतीले त्रिशूलीमा हाम फाले, श्रीमतीको मृत्यु9views